FFKM : Aoka ny tsirairay handini-tena ka hijery izay tsy mety nataony sy mbola ataony ! – MyDago.com aime Madagascar
Ho an’ny KRISTIANINA SY NY VAHOAKA MALAGASY
“Aoka ny fihavanana no hifamatoranareo, dia hazoto mitana ny firaisana avy amin’ny Fanahy Masina ianareo” (Efez.4:3)
Mamangy sy miarahaba ny Kristianina sy ny vahoaka Malagasy tsy an-kanavaka ny FFKM amin’izao Pentekosta 2011 izao.
Amin’ny maha-Mpaminany sy Raiamandreny azy, ny FFKM dia miteny amin’ny Kristianina sy ny vahoaka malagasy mba hampahatsiahy ny sitrapon’Andriamanitra eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina.
Mahatsapa ary ny FFKM fa :
Miha-potika ny fiaraha-monina sy ny toe-karena; mahazo toerana ny fifandrafiana sy ny fisaratsarahana; manjaka ny tsi-fahamarinana amin’ny endriny samihafa; mitombo ny herisetra sy ny tsi-fandriampahalemana; tsy misy hasina intsony ny ain’olombelona; miantraika eo amin’ny fiainanan’ny isan-tokantrano sy ny vahoaka malagasy izany rehetra izany. Mizotra mankamin’ny fahapotehana ny firenena.
Toa ataon’ny mpanao politika sasany kilalao sy itadiavana tombon-tsoa ny fiainam-pirenena ka ny vahoaka malagasy no mahita faisana.
Manoloana izany dia manambara amintsika ny FFKM fa:
Baikon’ny Tompo ho an’ny olombelona rehetra sady asan’ny Fanahy Masina ny fibebahana (Mk. 1:14-15; Jn. 16:8; Asa 3:19). Aoka ny tsirairay handini-tena ka hijery izay tsy mety nataony sy mbola ataony eo amin’ny fiainany sy ny fifandraisany amin’ny mpira-belona eo anatrehan’Andriamanitra ary hamantatra ny helony sy hiala amin’ny fahadisoany. Mahatsara ny fifandraisan’ny mpiara-belona izany, no dingana mitondra ho amin’ny fifamelan-keloka,
Ny Fiangonana tsirairay ihany koa dia entanina handini-tena sy hibebaka, hiseho ho ohatra sy hitaiza ny zanany, ho sahy hanitsy sy hiteny ary hitarika azy ireo hatrany ho any amin’ny fiainam-pibebahana. Satria izany no lalana hitanay lalana hitanay hitondra antsika hiaina ny fifamelan-keloka fototry ny fampihavanana.
Manamora ny fifamelan-keloka amin’ny samy olona ny fiaikena heloka amin’Andriamanitra (Mat 18:21-35). Mila mahatsiaro ho tompon’andraikitra manoloana ny zava-miseho ny tsirairay. Miantso fifamelan-keloka eo amin’ny ankohonana, eo amin’ny fiangonana, sy ny fiaraha-monina ary ny Firenena ny FFKM .
Ny FFKM dia manentana sy manainga ny fiangonana hitaiza ny olona rehetra ho amin’ny fahamarinana , ho fanandratana ny fanahy maha-olona.( (Sal 119: 160) hiverenan’ny fiadanana indray.
Ny FFKM dia hanao ho vaindohan-draharaha ny fanatanterahana ireo voalaza ireo eo anivon’ny fiangonana sy ny fiaraha-monina
Eto am-pamaranana dia indraminay ny tenin’ny Apostoly Paoly ao amin’ny Rom.12:2 izay mitaona antsika hihavao saina sy fo tanteraka hahaizantsika mamantatra ny sitrapon’Andriamanitra eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina.
Koa “meteza hovan’Andriamanitra isika” . Izany teny izany indrindra no nofidin’ny FFKM ho teny fanevan’ny Komity Foibe faha-34 sy ny Zaikabe faha-VII izay hatao any Ambositra ny faha 21-25 Novambra 2011 ho avy izao.
Ho Pentekosta mitondra ny rivotry ny fihavaozana ho amin’ny fiadanana ary mandrava ny efitry ny fisaratsarahana anie ity Pentekosta 2011 ity.
Ny Fanahin’ny Tompo Tsitoha anie hanafy hery sy hanolo-tsaina ary hitarika antsika amin’ny marina rehetra
Natao teto Antananarivo androany faha 12 Jona 2011
Atoa Lala Haja RASENDRAHASINA, Pastora Dr RAKOTO Endor Modeste
Mpitandrina (Filohan’ny FJKM) (Filohan’ny FLM)
Mgr Odon Marie Arsene RAZANAKOLONA Mgr RANARIVELO Samoela Jaona
(Filohan’ny EKAR) (Filohan’ny EEM)
Auteur Solo Razafy*Publié le 7 juin 2011 Catégories Politique
17 pensées sur “FFKM : Aoka ny tsirairay handini-tena ka hijery izay tsy mety nataony sy mbola ataony !”
Mbola sahy mijery ny tavany amin’ny fitaratra angaha ilay gamara be io ???
Iza no nitarika ny zanam-poza tsy hanaraka ny didy folon’Andriamanitra ???
Tsy vitan’ny kôfesy (con fesse) fotsiny izy ity ê !
Izao ihany no mahatonga ny fiainam-pirenena tsy handeha amin’izay laoniny sy hitsiny !!
Tsy nanongam-panjakàna izahay, koa aza aty aminay mihintsy no manao môraly !!!
ilay andriamanitr’i rasendrahasina ve io resahan-dr’i ffkm io e! rasendrahasina mantsy i ravalomanana no andriamanininy! mba menatra nareo filoham-piangonana hilahatra amin’io mpanompon-dravalonandra ravalomanana io e!
ary i odon razanabiby devoly
7 juin 2011 à 15 h 28 min
Mivoaha amin’izay ry gamara, fa sao dia mendy ao !
7 juin 2011 à 15 h 40 min
Que l’on constitue la vérité sur tous les evenements .
La premiere est une declaration commune sur les evenements qui se sont deroulés le lundi 15 mars 2009 à l’episcopat Antanimena . »Veritas in Caritas » .
Tokony atombokareo Ray ama-dReny ny fibebahana voalohany ! Dia raiso ny adidinareo Tompoko amin’ny fampihavanana ny Malagasy fa potika ny firenena.
7 juin 2011 à 15 h 55 min
Ny an-dry omar sy gamara, rehefa avy midaroka, mangalatra sy mamono, mandainga ary manao ny tsy tokony ho atao rehetra, dia mi-con-fesse ; madio hono avy eo !
Raha izaho aloha no mifanena amin’i Omar dia feno rora ny lalany e !
Karazan’ireny le pedophile amin’ny ankizy mpiangona !
Raha izaho aloha dia tsy hitako intsony izay hilazana azy fa
sady mampalahelo no mampivonto orona,amiko naleo tsy
niteny intsony fa vao maika manafintohina ny miheritreritra
i peuples malgaches dia tsy iza fa i vahoaka ihany, faharoa vody ohatran’i odon izy amiko, fahatelo: i odon no tokony hikofesse volohany ary izy irery ihany no nampianatra sy nampirisika ary faly ery tamin’ilay tao amin’ny épiscopat. Menatra aho raha izaho no katolika. ary farany fa maninona ianao ry Mgr Ranarivelo Jaona no milahatra amin’io tsivalahara io?
7 juin 2011 à 18 h 55 min
Tsy aleoko manao Atra ny dadanay toy izay ,olona mba nandihy fianarana handevozin’i Domelina
hataony andevo mihintsy t@ vola 150 mille FMG,avy eo koa mbola nirefotra fa tsy nalohan’ny be
tenda sy be atoka sy be kobo nefa ny tena efa lasa andevon’olona DJ ,dia ny tena no menatra!
dia tsy tahotra tsy henatra fa dia hitomany ho Mpanjaka!!!!!menatra anao aho ry kavim- barahana
tsy hanendrika fa handrovi-tsofina.
7 juin 2011 à 19 h 24 min
OOOH! TOUT LE MONDE A VU SUR LE NET QUE RAZANAKOLONA N’A PAS ETE IMPARTIAL EN 2009. IL AURAIT DU DEMISSIONNER DE SON POSTE.
7 juin 2011 à 19 h 54 min
Voapoakan’i domelina koa angaha dia io nitsaitsaika moramora niverina io.
Efa natakalon’i domelina devoly ihany koa,nataony fitaovana toy ny rehetra
dia avy eo tsipahany toy ny ex- foza rehetra e!aza hatao mahagaga intsony fa efa izay no
fandaharana. »Mamela ny helony fa tsy fantany izay hataony « .
8 juin 2011 à 5 h 39 min
Mba te-ahafantatra an’io olona manao « pseudo » hoe « Peuples malgaches » io aho. Tadidio Atoa (na Rtoa) fa tsy « Peuples malgaches »-nareo izahay sstria tsy mitovy mihitsy na ny fisainantsika, na ny olona tohanantsika. Ny anay dia DADA, ny anareo RADOMELINA.
Ka sasanangy samihafa ireo, na samy malagasy aza.
8 juin 2011 à 9 h 49 min
Ahitsio kely ny fisainana sy fiteny ry milaza azy ho : peuples malgaches a!!! Nefa : « hazo tokana tsy mba ala », izahay tsy mivavaka amin’olona, fa ianao indray no manova resaka eo , ianao no mivavaka amin’i omar sy ny sariny ary rajoelina, ny ataonao aza lazaina ho aton’ny hafa. Fa fombanareo foza izany! Mazava????
Ny pseudos-ny hafa no tian’i Ziry ho fantatra sa ny tavany mihintsy, no tiana ho hita ?
Raha ny tavany angamba dia, na an’eritreritra aza dia aleo tsy lazaina eto !
Raha pseudo indray dia ato misy santionany :
Jereo izay be pinces mena, sy manao « signon » !! Tsy mahagaga ê !!! MDR !!!!!!
Précédent Article précédent : Mouvance Ravalomanana Response to the SADC documents
Suivant Article suivant : Aiza izay sonia natao teo?